Nepali Calendar - २०७५ कार्तिक - नेपाली क्यालेन्डर
मंसिर २०७८ २१	मंगलबार,7Dec 2021 तृतिया, शुक्ल पक्ष
सुर्योदय: बिहान ०६:३८, सुर्यास्त: बेलुका ०५:०४ चन्द्रोदय: बिहान ०९:४६, चन्द्रास्त: रात्रि ०८:१७
२०७५ कार्तिक महत्वपूर्ण दिनहरु
१०: करवा चौथ
१९: काग तिहार
१९: धन तेरस
२०: कुकुर तिहार
२१: लक्ष्मी पूजा
२२: म्ह: पूजा
बिबाह: - ब्रतबन्ध: - पास्नी: २, ५, १९, २३
असोज २०७५ २८ 14 October 2018 आइतबार पञ्चमी, शुक्ल पक्ष गुणस्तर दिवसपचली भैरव यात्रा
पचली भैरव यात्रा
असोज २०७५ २९ 15 October 2018 सोमबार षष्ठी, शुक्ल पक्ष ग्रामिण महिला दिवससरस्वती आवाहनविल्व निमन्त्रणा
३० असोज २०७५ 16 October 2018 मंगलबार सप्तमी, शुक्ल पक्ष खाद्य दिवसफूलपातीसरस्वती स्तुति
असोज २०७५ ३१ 17 October 2018 बुधबार अष्ठमी, शुक्ल पक्ष गरिबी निवारण दिवसमहा अष्ठमीकालरात्रिसरस्वती विसर्जन
१ कार्तिक २०७५ 18 October 2018 बिहिबार नवमी, शुक्ल पक्ष तुला संक्रान्तीमहा नवमीबौद्वावतारमन्वादि:
२ कार्तिक २०७५ 19 October 2018 शुक्रबार दशमी, शुक्ल पक्ष बिजया दशमीदुर्गा विसर्जनखड्गयात्रासरस्वती विसर्जन
३ कार्तिक २०७५ 20 October 2018 शनिबार एकादशी, शुक्ल पक्ष पापांकुश एकादशीअन्नपूर्ण यात्रा
कार्तिक २०७५ ४ 21 October 2018 आइतबार द्वादशी, शुक्ल पक्ष
कार्तिक २०७५ ५ 22 October 2018 सोमबार त्रयोदशी, शुक्ल पक्ष प्रदोष व्रत
६ कार्तिक २०७५ 23 October 2018 मंगलबार चतुर्दशी, शुक्ल पक्ष कोजाग्रत पूर्णिमाशरद पूर्णिमा
कार्तिक २०७५ ७ 24 October 2018 बुधबार पूर्णिमा, शुक्ल पक्ष विश्व विकास सूचना दिवसअश्विन पूर्णिमा
विश्व विकास सूचना दिवस
कार्तिक २०७५ ८ 25 October 2018 बिहिबार प्रतिपदा, कृष्ण पक्ष
कार्तिक २०७५ ९ 26 October 2018 शुक्रबार द्वितीया, कृष्ण पक्ष
१० कार्तिक २०७५ 27 October 2018 शनिबार तृतिया, कृष्ण पक्ष करवा चौथसंकष्टी चतुर्थी
कार्तिक २०७५ ११ 28 October 2018 आइतबार चतुर्थी, कृष्ण पक्ष
कार्तिक २०७५ १२ 29 October 2018 सोमबार पञ्चमी, कृष्ण पक्ष
कार्तिक २०७५ १३ 30 October 2018 मंगलबार षष्ठी, कृष्ण पक्ष
कार्तिक २०७५ १४ 31 October 2018 बुधबार सप्तमी, कृष्ण पक्ष अहोई अष्टमीराधा कुण्ड स्नानअष्टमी व्रत
राधा कुण्ड स्नान
कार्तिक २०७५ १५ 1 November 2018 बिहिबार अष्ठमी, कृष्ण पक्ष राधा अष्टमी
कार्तिक २०७५ १६2November 2018 शुक्रबार नवमी, कृष्ण पक्ष
१७ कार्तिक २०७५3November 2018 शनिबार एकादशी, कृष्ण पक्ष रमा एकादशी
कार्तिक २०७५ १८4November 2018 आइतबार द्वादशी, कृष्ण पक्ष युनेस्को दिवसगोवत्स द्वादशी
१९ कार्तिक २०७५5November 2018 सोमबार त्रयोदशी, कृष्ण पक्ष यमपञ्चक आरम्भकाग तिहारधन तेरसप्रदोष व्रतयमदीपदान
२० कार्तिक २०७५6November 2018 मंगलबार चतुर्दशी, कृष्ण पक्ष कुकुर तिहारनरक चतुर्दशी
२१ कार्तिक २०७५7November 2018 बुधबार औंशी, कृष्ण पक्ष दिपावलीलक्ष्मी पूजाकार्तिक औंसीदर्श औंसीसुखरात्रि
२२ कार्तिक २०७५ 8 November 2018 बिहिबार प्रतिपदा, शुक्ल पक्ष रेडियोग्राफी दिवसगोवर्धन पूजाम्ह: पूजाचन्द्र दर्शनने. सं. ११३९ प्रारम्भ
२३ कार्तिक २०७५9November 2018 शुक्रबार द्वितीया, शुक्ल पक्ष विश्व स्वतन्त्रता दिवसभाई टिकायम द्वितीया
विश्व स्वतन्त्रता दिवस
कार्तिक २०७५ २४ 10 November 2018 शनिबार तृतिया, शुक्ल पक्ष
२५ कार्तिक २०७५ 11 November 2018 आइतबार चतुर्थी, शुक्ल पक्ष फाल्गुनन्द जयन्ती
कार्तिक २०७५ २६ 12 November 2018 सोमबार पञ्चमी, शुक्ल पक्ष निमुनिया दिवसलाभ पञ्चमी
२७ कार्तिक २०७५ 13 November 2018 मंगलबार षष्ठी, शुक्ल पक्ष छट पूजा
कार्तिक २०७५ २८ 14 November 2018 बुधबार सप्तमी, शुक्ल पक्ष मधुरोग दिवस
कार्तिक २०७५ २९ 15 November 2018 बिहिबार सप्तमी, शुक्ल पक्ष गोपाष्टमीअष्टमी व्रतमुख: अष्टमी
कार्तिक २०७५ ३० 16 November 2018 शुक्रबार अष्ठमी, शुक्ल पक्ष सहनशीलता दिवस
१ मंसिर २०७५ 17 November 2018 शनिबार नवमी, शुक्ल पक्ष वृश्चिक संक्रान्तीविद्यार्थी दिवसअक्षय नवमीकुष्माण्ड नवमीसत्य युगादि
बिबाह शुभ लगन: - ब्रतबन्ध शुभ साइत: - पास्नी शुभ साइत: २, ५, १९, २३
नागरिक उड्यान दिवस आज - मंसिर २१ Prithvi
विवाह पञ्चमी भोलि - मंसिर २२ Prithvi
जनकपुरमा मेला भोलि - मंसिर २२ Prithvi
षडानन्द जयन्ती भोलि - मंसिर २२ Prithvi
चम्पा षष्ठी पर्सि - मंसिर २३ Prithvi
भ्रस्टाचार बिरोध दिवस पर्सि - मंसिर २३ Prithvi
मानव अधिकार दिवस ३ दिन पछि - मंसिर २४ Prithvi
अष्टमी व्रत ४ दिन पछि - मंसिर २५ Prithvi
गोरखकाली पूजा ४ दिन पछि - मंसिर २५ Prithvi
बखुमद अष्टमी ४ दिन पछि - मंसिर २५ Prithvi
पहाड दिवस ४ दिन पछि - मंसिर २५ Prithvi
पाङ्गामा वैष्णवीदेवी यात्रा ५ दिन पछि - मंसिर २६ Prithvi
दुर्गाजाँत ५ दिन पछि - मंसिर २६ Prithvi
पोखरीजाँत ५ दिन पछि - मंसिर २६ Prithvi
कीर्तिपुरमा इन्द्रायणी यात्रा ६ दिन पछि - मंसिर २७ Prithvi
मोक्षदा एकादशी ७ दिन पछि - मंसिर २८ Prithvi
गीता जयन्ती ७ दिन पछि - मंसिर २८ Prithvi
प्रदोष व्रत ९ दिन पछि - पौष १ Prithvi
धनु संक्रान्ती ९ दिन पछि - पौष १ Prithvi
काँशीमा पिशाचमोचन तीर्थ श्राद्ध १० दिन पछि - पौष २ Prithvi
मेष ( च, चू, चे, ला, ली, लू, ले, लो, अ, आ ) एउटा मित्रले तपाईंको खुल्ला मन र सहिष्णुता शक्तिको परीक्षण गर्न सक्छ। तपाईंले आफ्नो मान आत्मसमर्पण गर्नु हुँदैन र हरेक निर्णयमा तर्कसङ्गत हुन होसियार हुनुपर्छ। आमाबाबुको सहायताले गर्दा वित्तीय बाधाहरु टर्दै गएको जस्तो देखिन्छ। समस्या घर अगाडि नै बढ्दैछ, यसैले तपाईंले ध्यान दिएर बोल्नु पर्नेछ। रायको भिन्नताले व्यक्तिगत सम्बन्ध तोडिन सक्छ। आज काममा सबैले इमानदारीसाथ तपाईंको कुरा सुन्नेछन्। यात्राले तपाईंलाई नयाँ ठाउँहरू देख्न र महत्त्वपूर्ण मान्छेहरू भेट्न सघाउँछ। आज तपाईंलाई आफ्नो जोडीको कारण समस्यामा परेको महसुस हुन सक्छ।
वृष ( ई, उ, ए, ऐ, ओ, व, वा, वो, वे, वौ, वं ) आज तपाईंले धेरै खिचलो र फरक विचारहरूको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ जसले तपाईंले रिस उठ्ने र अप्ठ्यारो गर्नेछ। आजैको दिनको लागि मात्रै बाँच्ने र मनोरञ्जनमा धेरै समय र पैसा खर्च गर्ने आफ्नो बानीमा नियन्त्रण गर्नुहोस्। आवश्यक परेमा मित्रहरूले तपाईंको सहायता गर्नेछन्। अरूको हस्तक्षेपले तनाउ उत्पन्न हुनेछ। आज अनुभवी मान्छेसँग मिलेर तिनीहरूबाट केही सिक्नुहोस्। आफन्तहरूले आज तपाईंको जोडीसित तर्क गर्न सक्छन्।
मिथुन ( क, का, की, कू, के, को, कौ, छ, ह, हा, छा ) खुल्ला खाना खाँदा विशेष सावधानी लिनुपर्छ। यसको लागि तपाईंले अनावश्यक तनाउ नलिनुहोस् किनकि यसले मानसिक तनाउमात्र दिनेछ। यदि सञ्चार र छलफलहरू राम्रो तरीकाले भएनन् भने - तपाईंले रीस उठेर पछि पछुताउनु पर्ने कुरा बोल्न सक्नुहुन्छ - केही बोल्नु अघि राम्ररी सोच्नुहोस्। आफ्नो साथीको अभावमा पनि उपस्थिति महसुस गर्ने सम्भावना छ। आफ्नो कौशल देखाउन अवसर आज तपाईंसँग हुनेछ। व्यापारको उद्देश्यको लागि गरिएको यात्रा लामो समयपछि लाभदायी साबित हुनेछ। आज, तपाईंले आफ्नो जोडीको मायाम जीवनका सबै कठिनाइहरू बिर्सिनु हुनेछ।
कर्कट ( हि, हू, हे, हो, डा, डी, डू, ड़, डे, डो ) स्वास्थ्य राम्रो रहन्छ। तपाईंको समस्या गम्भीर हुनेछ - तर तपाईंका वरिपरिका मानिसहरूले कष्ट महसुस गर्न सक्दैनन् - किनकि तिनीहरूलाई यो आफ्नो काम हैन जस्तो लाग्छ। रोमान्सको लागि धेरै राम्रो दिन होइन किनकि तपाईंले साँचो प्रेम पाउन सक्नु हुनेछैन। तपाईंको पेशाको दक्षता परीक्षण गरिनेछ। तपाईंले इच्छित परिणाम प्रदान गर्नको लागि आफ्नो प्रयासमा ध्यान दिनु आवश्यक छ। केही मनोरञ्जनका लागि राम्रो दिन। आज तपाईं वा तपाईंको जोडीलाई ओछ्यानमा चोट लाग्न सक्छ, त्यसैले एक-अर्कासँग नम्र हुनुहोस्।
शिंह ( म, मा, मी, मू, मे, मो, मौ, मं, ट, टा, टी़, टू, टो ) तपाईंको विनम्र व्यवहारको सराहना गरिनेछ। धेरै मानिसहरूले तपाईंको मौखिक रूपमा प्रशंसा गर्नेछन्। अस्थायी ऋणका लागि तपाईंसँग भेट गर्नेहरूलाई बेवास्ता गर्नुहोस्। भावनात्मक जोखिम तपाईंको पक्षमा हुनेछ। तपाईं साँझ साथीहरूसँग बाहिर जानुभयो भने तत्काल रोमान्स आउन सक्छ। कामका कुराहरू तपाईंको पक्षमा हुने देखिन्छन्। तपाईंको चुम्बकीय व्यक्तित्वले तपाईंलाई उज्यालोमा राख्नेछ। एउटा सानो प्रयासले, आजको दिन तपाईंको वैवाहिक जीवनको सबैभन्दा राम्रो दिन बन्न सक्छ।
कन्या ( पा, प, पु, पं, प, पे, पो, पौ, टो ) आज तपाईंसँग आफ्नो स्वास्थ्य र शरीर सुधारका कामहरू गर्न प्रशस्त समय हुनेछ। तपाईं यात्रा र पैसा खर्च गर्ने मुडमा हुनुहुनेछ - तर त्यसो गर्नुभयो भने तपाईं पछुताउनु हुनेछ। तनाउको समय हुन सक्छ तर परिवारको समर्थनले तपाईंलाई मद्दत गर्नेछ। तपाईंको प्रियतमा आज आफ्नी जीवित दूत बन्नेछिन; यस क्षणको कदर गर्नहोस्। तपाईंसँग काममा कम मेल राख्ने मान्छेले पनि आज तपाईंसँग असल कुराकानी गर्नेछ। तपाईंको मनमा भएको कुरा भन्न नडराउनुहोस्। विवाह आशिष् हो, र तपाईंले आज यसको अनुभव गर्नु हुनेछ।
तुला ( र, रा, री, रु, रे, रो, रं, ता, त, तू, ते, तो, ती ) धेर नखानुहोस् र तन्दुरूस्त हुनको लागि नियमित रूपमा स्वास्थ्य क्लब जानुहोस्। आफ्नो खर्चमा अप्रत्याशित वृद्धिले तपाईंको मनमा शान्ति हुनेछैन। नातिनातिनाहरू खुशी गराउने राम्रा स्रोत हुनेछन्। आत्मीय प्रेमको एक्स्टसी आज महसुस हुनेछ। यसको लागि केही समय लिनुहोस्। तपाईं कार्यालयमा आज गरिरहेको कामले भविष्यमा विभिन्न तरिकामा तपाईंलाई लाभ हुनेछ। जीवनले तपाईंलाई आश्चर्यहरू दिइ राख्छ, तर आज तपाईं आफ्नो जोडीको अचम्मको पक्ष देखेर मक्ख पर्नुहुनेछ।
वृश्चिक ( न, ना, नी, नु, ने, नो, नै, नं, या, यी, यू, य ) तपाईंको दिने मनोवृत्तिको फल प्राप्त हुनेछ किनकि तपाईं शंका, निराशा, विश्वासको कमी, लोभ, आसक्ति, घमण्ड र डाह जस्ता धेरै दोषबाट मुक्त हुन सक्ने सम्भावना छ। आफ्नो हँसिलो प्रकृतिले सामाजिक जमघटमा तपाईंलाई लोकप्रिय बनाउनेछ। अनपेक्षित रोमान्टिक झुकावले बेलुकीतिर तपाईंको मन ढाक्नेछ। तपाईंसे आज काममा एउटा अचम्मको व्यक्ति भेट्न सक्नु हुनेछ। तपाईंको जीवनसाथी कहिल्यै आजभन्दा रमाइलो थिएनन्।
धनु ( ये, यो, ध, धा, धी, धू, धे, फ, भा, भी, भू, भे ) तपाईंसँग आज आफ्नो लागि पर्याप्त समय हुनेछ। त्यसैले; आफ्नो राम्रो स्वास्थ्यको लागि लामो पैदल यात्राका लागि बाहिर जानुहोस्। हतारमा निवेश नगर्नुहोस्। यदि निवेश गर्दा तपाईंले सबै सम्भव कोणबाट हेर्नु भएन भने घाटा निश्चित छ। तपाईंको आवश्यकताहरूको लागि तपाईंको भाइ तपाईंले सोचे भन्दा अझ बढी सहयोगी हुनेछ। भावनात्मक रोकावटले तपाईंलाई समस्यामा पार्नेछन्। आज तपाईं उपस्थित भएका व्याख्यान र सेमिनारले विकासको लागि नयाँ विचार ल्याउनेछन्। तपाईंको वैवाहिक जीवनलाई आज केही ठाउँ चाहिन्छ।
मकर ( भो, ज, जा, जी, जे, जो, जै, जं, ख, खी, खू, खो, ग, गा,गी ) बढी खानबाट जोगिनुहोस् र आफ्नो वजनमा रोक लगाउनुहोस्। तपाईंको समस्या गम्भीर हुनेछ - तर तपाईंका वरिपरिका मानिसहरूले कष्ट महसुस गर्न सक्दैनन् - किनकि तिनीहरूलाई यो आफ्नो काम हैन जस्तो लाग्छ। तपाईंले आज प्रेम प्रदूषण फैलाउनु हुनेछ। दिवास्वप्नले तपाईंको पतन हुनेछ - आफ्नो काम गर्न अरूलाई नभन्नुहोस्। तपाईंको प्रतिस्पर्धी प्रकृतिले तपाईं प्रवेश गरेको कुनै पनि प्रतियोगिता जित्न सक्षम गराउनेछ। तपाईंको जीवनसाथी कहिल्यै आजभन्दा रमाइलो थिएनन्।
कुंभ ( गु, गे, गो, स, सा, सी, सु, से, सं, सो, सौ, द, दा ) तपाईंको बलियो लचक र निर्भयताले मानसिक संकायको शक्ति धेरै बढाउनेछ। यो गतिलाई चलाई राख्नुहोस् जसले गर्दा कुनै पनि अवस्थालाई नियन्त्रणमा राख्न तपाईंलाई प्रोत्साहन मिल्नेछ। दिनको पछिल्लो भागमा वित्तीय सुधार हुनेछ। तपाईंले आफ्नो घरको वातावरण परिवर्तन गर्न अघि अरूको अनुमोदन प्राप्त गर्नुभयो भन्ने निश्चित गर्नुहोस्। प्रेममा निराशा हुन सक्छ तर मन नमार्नुहोस् किनभने प्रेमीहरू जहिल्यै चापलूस हुन्छ्न। प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाका लागि परीक्षा दिनेहरूले आफुलाई शान्त राख्नु आवश्यक छ। परीक्षाको डरले तपाईं सताओस। तपाईंको प्रयासले निश्चित सकारात्मक परिणाम ल्याउनेछ। तपाईंको यो एउटा रमाइलो रोमान्टिक दिन हुन सक्छ, तर केही स्वास्थ्य समस्याहरू आउन सक्छन्।
मीन ( दि, दू, झं, थ, था, दे, दो, च, चा, ची ) रक्तचापका विरामीहरुले आफ्नो रक्तचाप कम गर्न र कोलेस्ट्रल नियन्त्रणमा राख्न रेड वाइनको मद्दत लिन सक्नुहुनेछ। यसले तिनीहरूलाई धेरै आराम दिनेछ। हाल तपाईंको व्यक्तिगत जीवन तपाईंको ध्यानको प्रमुख कारण भएको छ - तर आज तपाईं सामाजिक काम, दान र तपाईंसँग समस्या लिएर आउनेहरूको मद्दत गर्नमा केन्द्रित हुनुहुनेछ। आफ्नो रोमान्टिक दृश्य प्रसारित हुन नदिनुहोस्। समर्पित पेशावरको लागि प्रचार र मौद्रिक लाभ हुनेछ। तपाईंको प्रतिस्पर्धी प्रकृतिले तपाईं प्रवेश गरेको कुनै पनि प्रतियोगिता जित्न सक्षम गराउनेछ। आज तपाईंले आफ्नो जोडीलाई कतै घुमाउन लिएर जानु भयो भने, तपाईंहरूको सम्बन्ध अझ राम्रो हुनेछ।
विवाह पञ्चमी २२ मंसिर, १ दिन
उधौली पर्व ४ पौष, १२ दिन
योमरी पुन्हि ४ पौष, १२ दिन
तमु ल्होसार १५ पौष, २३ दिन
नयाँ वर्ष (एडी) १७ पौष, २५ दिन
तोल् ल्होसार १९ पौष, २७ दिन
तिलको लड्डु खाने दिन १ माघ, १ महिना ९ दिन
श्री स्वस्थानी पूर्णिमा ३ माघ, १ महिना ११ दिन
सोनम् ल्होसार १९ माघ, १ महिना २७ दिन
सरस्वती पूजा २२ माघ, २ महिना ० दिन
भ्यालेन्टाइन डे २ फागुन, २ महिना ९ दिन
प्रजातन्त्र दिवस ७ फागुन, २ महिना १४ दिन
महा शिवरात्रि १७ फागुन, २ महिना २४ दिन
ग्याल्बो ल्होसार १९ फागुन, २ महिना २६ दिन
नारी दिवस २४ फागुन, ३ महिना १ दिन
होली ३ चैत्र, ३ महिना १० दिन
घोडेजात्रा १८ चैत्र, ३ महिना २५ दिन
एप्रिल फूल डे १८ चैत्र, ३ महिना २५ दिन
राम नवमी २७ चैत्र, ४ महिना ४ दिन
नयाँ वर्ष १ बैशाख, ४ महिना ८ दिन
महावीर जयन्ती १ बैशाख, ४ महिना ८ दिन
लोकतन्त्र दिवस ११ बैशाख, ४ महिना १८ दिन
आमाको मुख हेर्ने दिन १७ बैशाख, ४ महिना २४ दिन
अक्षय तृतीया २० बैशाख, ४ महिना २७ दिन
उभौली पर्व २ जेष्ठ, ५ महिना १० दिन
बुद्ध पूर्णिमा २ जेष्ठ, ५ महिना १० दिन
गणतन्त्र दिवस १५ जेष्ठ, ५ महिना २३ दिन
दहिचिउरा खाने दिन १५ आषाढ, ६ महिना २४ दिन
गुरु पूर्णिमा २९ आषाढ, ७ महिना ८ दिन
खिर खाने दिन १५ श्रावन, ७ महिना २६ दिन
नाग पञ्चमी १७ श्रावन, ७ महिना २८ दिन
मित्रता दिवस २२ श्रावन, ८ महिना ३ दिन
रक्षा बन्धन २६ श्रावन, ८ महिना ७ दिन
जनै पूर्णिमा २६ श्रावन, ८ महिना ७ दिन
गाईजात्रा २७ श्रावन, ८ महिना ८ दिन
श्री कृष्ण जन्माष्ठमी २ भाद्र, ८ महिना १४ दिन
कुशे औंसी ११ भाद्र, ८ महिना २३ दिन
बुवाको मुख हेर्ने दिन ११ भाद्र, ८ महिना २३ दिन
हरितालीका तीज १४ भाद्र, ८ महिना २६ दिन
गणेश चतुर्थी १५ भाद्र, ८ महिना २७ दिन
ऋषि पञ्चमी १६ भाद्र, ८ महिना २८ दिन
ईन्द्रजात्रा २४ भाद्र, ९ महिना ६ दिन
जितिया पर्व २ असोज, ९ महिना १५ दिन
संविधान दिवस ३ असोज, ९ महिना १६ दिन
घटस्थापना १० असोज, ९ महिना २३ दिन
बिजया दशमी १९ असोज, १० महिना २ दिन
कोजाग्रत व्रत २२ असोज, १० महिना ५ दिन
करवा चौथ २७ असोज, १० महिना १० दिन
काग तिहार ६ कार्तिक, १० महिना २० दिन
धन तेरस ६ कार्तिक, १० महिना २० दिन
लक्ष्मी पूजा ७ कार्तिक, १० महिना २१ दिन
कुकुर तिहार ७ कार्तिक, १० महिना २१ दिन
म्ह: पूजा ९ कार्तिक, १० महिना २३ दिन
भाई टिका ९ कार्तिक, १० महिना २३ दिन
छट पूजा १३ कार्तिक, १० महिना २७ दिन
गुरु नानक जयन्ती २२ कार्तिक, ११ महिना ६ दिन
फाल्गुनन्द जयन्ती २५ कार्तिक, ११ महिना ९ दिन
बाला चतुर्दशी ६ मंसिर, ११ महिना २० दिन
११९.९७ / १२०.५७
१३५.७५ / १३६.४२
१५८.७५ / १५९.५४
३२.६६ / ३२.८३
३२.९४ / ३३.११
१.०६ / १.०७
३१.९८ / ३२.१४
०.१०१६ / ०.१०२१
८४.०० / ८४.४२
९३.४१ / ९३.८७
२८.३५ / २८.५०
१५.३९ / १५.४७
१८.२५ / १८.३४
३१८.२२ / ३१९.८१
३९६.६६ / ३९८.६४
८७.४६ / ८७.९०
१३.१२ / १३.१९
१३०.६९ / १३१.३४
३.५४ / ३.५६
१८.८१ / १८.९१